Okwu ndị metụtara FPC board circuit sekit - dịdị PCB, nrụpụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na -ebubata ya, onye na -emepụta ya
» Blog » Okwu ndị metụtara FPC board circuit sekit
Okwu ndị metụtara FPC board circuit sekit
A na -ejikarị FPC n’ọtụtụ ngwaahịa dị ka ekwentị mkpanaaka, laptọọpụ, PDA, igwefoto dijitalụ, LCMS, wdg ebe a bụ ụfọdụ okwu FPC na -emekarị.
1. Oghere oghere (site na oghere, oghere ala)
Ọ na -ezokarị aka na mkpuchi (site na oghere ka ebu ụzọ tụọ ya) n’elu bọọdụ na -agbanwe agbanwe, nke a na -eji dabara na sekit nke bọọdụ na -agbanwe agbanwe dị ka ihe nkiri ịgbado ọkụ. Otú ọ dị, a ga -ama ụma kpughee oghere oghere mgbanaka oghere ma ọ bụ mpe mpe akwa square maka ịgbado ọkụ iji kwado ịgbado ọkụ nke akụkụ. Ihe a na-akpọ ‘oghere oghere’ pụtara na oyi akwa dị n’elu nwere oghere, ka ụwa nke dị n’èzí nwee ike ‘ịbịaru nso’ ihe mkpuchi efere dị n’okpuru mkpuchi nchekwa elu. Ụfọdụ bọọdụ multilayer nwekwara oghere ndị ahụ ekpughere.
2. acryli acryli
A na -akpọkarị ya resin polyacrylic acid. Ọtụtụ bọọdụ na -agbanwe agbanwe na -eji ihe nkiri ya eme ihe nkiri ọzọ.
3. Ihe nrapado ma ọ bụ nrapado
Ihe, dị ka resin ma ọ bụ mkpuchi, nke na -enyere ihu abụọ aka imecha njikọta.
4. Anchorage spurs mboanuohia
N’elu efere etiti ma ọ bụ otu panel, iji mee ka mgbanaka mgbanaka oghere nwere nrapado siri ike n’elu elu efere, enwere ike itinye ọtụtụ mkpịsị aka na oghere dị oke n’èzí mgbanaka oghere iji mee ka oghere mgbanaka gbakwunyere, iji belata. ekwe omume nke na -ese n’elu ala efere.
Dịka otu njirimara nke bọọdụ flex dị ike, dịka ọmụmaatụ, ịdị mma nke bọọdụ na -agbanwe agbanwe nke ejikọtara na isi mbipụta nke draịvụ diski kọmputa ga -erute ‘nnwale nnwale’ nke otu ijeri ugboro.
6. Bonding oyi akwa bonding oyi akwa
Ọ na -ezo aka na akwa nrapado n’etiti mpempe ọla kọpa na mkpụrụ polyimide (PI) nke ihe nkiri nke bọọdụ ọtụtụ, ma ọ bụ teepu TAB, ma ọ bụ efere nke bọọdụ na -agbanwe agbanwe.
7. Ihe mkpuchi / mkpuchi
Maka okirikiri okirikiri nke bọọdụ na -agbanwe agbanwe, agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke a na -eji osisi siri ike adịghị mfe iji mee ihe maka ịgbado ọkụ, n’ihi na ọ nwere ike ịpụ mgbe ọ na -ekwe. Ọ dị mkpa iji akwa “acrylic” dị nro nke edobere n’elu bọọdụ ahụ, nke a na -enweghị ike iji mee ya dị ka ihe nkiri ịgbado ọkụ, kamakwa chebe sekit dị mpụta, ma kwalite nguzogide na ịdịte aka nke bọọdụ dị nro. Nke a pụrụ iche “ihe nkiri dị n’èzí” ka akpọrọ ihe mkpuchi elu ma ọ bụ akwa nchekwa.
8. Mgbanwe na -agbanwe agbanwe (FPC) bọọdụ na -agbanwe agbanwe
Ọ na-ezo aka na bọọdụ sekit na-agbanwe agbanwe nke kwesịrị ka ejiri ya na-aga n’ihu, dị ka bọọdụ na-agbanwe agbanwe n’isi isi-agụ nke draịvụ diski. Na mgbakwunye, enwere “FPC static”, nke na -ezo aka na bọọdụ na -agbanwe agbanwe nke anaghị arụ ọrụ ma emechaa ya nke ọma.
9. Ihe nrapado ihe nkiri
Ọ na -ezo aka na oyi akwa ejikọtara ọnụ, nke nwere ike ịgụnye ihe nkiri nke ịkwado akwa eriri, ma ọ bụ akwa dị larịị nke ihe nrapado na -enweghị ihe na -eme ka ihe sie ike, dị ka njikọta nke FPC.
10. Circuit na -agbanwe agbanwe na -agbanwe agbanwe, bọọdụ na -agbanwe agbanwe FPC
Ọ bụ bọọdụ sekit pụrụ iche, nke nwere ike ịgbanwe ọdịdị nke oghere akụkụ atọ n’oge mgbakọ mgbada. Mkpụrụ ya bụ polyimide na -agbanwe agbanwe (PI) ma ọ bụ polyester (PE). Dị ka bọọdụ siri ike, bọọdụ dị nro nwere ike ime oghere site na oghere ma ọ bụ mpe mpe akwa maka site na ntinye oghere ma ọ bụ nrụnye nrapado n’elu. Enwere ike itinye elu bọọdụ ahụ na akwa mkpuchi dị nro maka nchebe na ebumnuche ịgbado ọkụ, ma ọ bụ jiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -emegide mgbochi dị nro.
11. Mgbanwe mgbanwe
Ihe (efere) agbajiri ma ọ bụ mebie n’ihi ugboro ugboro na -ehulata na ihu, nke a na -akpọ ọdịda na -agbanwe agbanwe.
12. Kapton polyamide ihe dị nro
Nke a bụ aha azụmaahịa nke ngwaahịa Dupont. Ọ bụ ụdị mpempe akwụkwọ “polyimide” na -egbochi ihe dị nro. Mgbe agachibidoro foil ọla kọpa ma ọ bụ foil ọla kọpa, enwere ike ịme ya ka ọ bụrụ ntọala nke efere na -agbanwe agbanwe (FPC).
13. Mgbanwe akpụkpọ ahụ
N’iji ihe nkiri Mylar dị ka onye na -ebu ya, a na -ebipụta mpekere ọlaọcha (mado ọlaọcha ma ọ bụ mado ọlaọcha) na sekit ihe nkiri gbara ọkpụrụkpụ site na usoro mbipụta ihuenyo, wee jikọta ya na oghere mkpuchi na ogwe aka ma ọ bụ PCB ka ọ bụrụ ngbanwe ma ọ bụ keyboard. A na-ejikarị obere “igodo” a eme ihe na ihe mgbako ejiri aka, akwụkwọ ọkọwa okwu elektrọnik, na njikwa anya nke ụfọdụ ngwa ụlọ. A na -akpọ ya “membrane switch”.
14. Ihe nkiri polyester
A na -akpọ ya dị ka mpempe akwụkwọ PET, ngwaahịa DuPont a na -ahụkarị bụ ihe nkiri Mylar, nke bụ ihe nwere ezigbo nguzo ọkụ eletrik. N’ime ụlọ ọrụ sekit sekit, mkpuchi mkpuchi na -adị n’elu onyonyo akọrọ nke ihe onyonyo na ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi dị na FPC bụ ihe nkiri PET, a pụkwara iji ha mee ihe dị ka mkpụrụ osisi mpe mpe mpe akwa ọlaọcha. N’ime ụlọ ọrụ ndị ọzọ, enwere ike iji ha dị ka akwa mkpuchi, eriri, mkpuchi ma ọ bụ nchekwa tubular nke ọtụtụ IC.
Ọ bụ ezigbo resin polymerized nke bismaleimide na aromaticdiamine. A maara ya dị ka kerimid 601, ngwaahịa ntụ ntụ nke ụlọ ọrụ French “Rhone Poulenc” wepụtara. Dupont mere ya ka ọ bụrụ mpempe akwụkwọ akpọrọ Kapton. Efere efere a nwere ezigbo nguzogide ọkụ na nguzogide eletriki. Ọ bụghị naanị ihe dị mkpa maka FPC na taabụ, kamakwa ọ bụ efere dị mkpa maka bọọdụ siri ike nke ndị agha na supercomputer motherboard. Nsụgharị ala nke ihe a bụ “polyamide”.
16. Ịga n’ihu iji na -emegharị ọnụ
Enwere ike imepụta ụfọdụ akụkụ eletrọnịkị site na ndọghachi azụ na usoro mwepụ nke disel (diski), dị ka taabụ, okpokolo agba nke IC, ụfọdụ bọọdụ na -agbanwe agbanwe (FPC), wdg. mezue ọrụ ha na -akpaghị aka n’ịntanetị, ka ịchekwaa oge na ụgwọ ọrụ nke otu ọrụ.